चिनियाँ र भारतीय रेल दुबैकाे गन्तव्य काठमाण्डौं ! – Himalaya TV
Home » समाचार » चिनियाँ र भारतीय रेल दुबैकाे गन्तव्य काठमाण्डौं !
चिनियाँ र भारतीय रेल दुबैकाे गन्तव्य काठमाण्डौं !
२५ चैत्र २०७४, आईतवार ०८:४९
काठमाण्डौ २५ चैत्र । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण भारतलाई जिम्मा दिने योजना बनाएको सरकारले अब भारतीय रेललाई काठमाडौं ल्याउने भएको छ। काठमाडौं आएको चिनियाँ रेल चितवन हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने सरकारी योजना सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा भारतीय रेलको गन्तव्य पनि काठमाडौं बनेको छ।
सन् २०१६ को मार्चमा चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केरुङ– काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका थिए। चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले यो रेल मार्गका लागि पौने तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने जनाएको छ। उत्तरको रेल काठमाडौं ल्याउने सम्झौता भएको दुई वर्षपछि दक्षिणको रेल पनि काठमाडौं ल्याउने सम्झौता भएको छ। यो सम्झौताअनुसार काम भए उत्तर र दक्षिणका रेल काठमाडौंमा भेटे हुनेछन्।
चीनबाट भारत पुग्न दुई सय ३० किलोमिटर रेल यात्रा गर्नु पर्नेछ। यो मुस्किलले एक घन्टाको दूरी हो। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गले जोड्ने सहमति भएको छ। नेपाल–भारतको सिमा क्षेत्र रक्सौलसम्म अहिले भारतीय रेल सञ्चालन भइरहेको छ। रक्सौल–काठमाडौंं रेलमार्ग निर्माणका हिसाबले पनि सहज मानिन्छ। एक सय ३० किलोमिटर मा दूरी रहेको यो मार्गमा विद्युतीय रेल कुद्नेछ। यो रेलको निर्माण भारत सरकारले आफ्नै खर्चमा गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।